Mountain Television nation's first popular and leading analytical news channel. Mountain covers all the latest news from Nepal, Political News, Science news, Social news, Sport news, Ecomony news, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview and many more. कानून आयोगका सदस्य परस्त्रीसँग रंगेहात पक्राउ, २८ कोर्रा हानियो – Emountain TV
एजेन्सी, २१ कात्तिक । हामीकहाँ कानून बनाउनेले नै कानूनको उल्लंघन गर्ने तर शक्तिका भरमा उन्मुक्ति पाउने गरेका अनेकन घटनाहरु हुने गर्दछन् । तर इण्डोनेसियामा चाहीँ आफैले बनाएको कानून तोड्ने एक व्यक्तिलाई कडा सजाइँ दिइएको छ ।
इण्डोनेसियाको सुमात्रामा धोकाधडी तथा व्यभिचार विरुद्धको कानून बनाउने मध्येका एकजना मुखलिस बिन मुहम्मद नामका व्यक्ति आफैले उक्त कानूनको उल्लंघन गर्दै अपराध गरे । जसका कारण उनलाई सजायँ स्वरुप २८ कोर्रा हानिएको छ ।
इण्डोनेसियामा कुनै विवाहित पुरुषले अरु परस्त्रीसँग सम्बन्ध राख्नुलाई ठूलो व्यभिचारको अपराध मानिन्छ । सुमात्रा टापुस्थित एकेह प्रान्तमा त्यहाँको एकेह उलेमा काउन्सिलले यस सम्बन्धमा कडा कानून तयार गरी लागू गरेको थियो । उक्त काउन्सिलको कानून तर्जुमाका क्रममा मुखलिस पनि सहभागी थिए । तर पछि उनले आफैले बनाएको त्यो कानून तोडे र पक्राउ परे ।
समाचार अनुसार सामुद्रिक तटको नजिकै एउटा कारमा ती व्यक्ति अर्की एक महिलासँग रंगेहात पक्राउ परेका थिए । घरमा आफ्नी श्रीमती हुँदाहुँदै कारमा अर्की महिलासँग रोमान्स गरेको पाइएपछि उनीमाथि व्यभिचार विरुद्धको कानून अन्तर्गत गत बिहिबार कडा सजायँ दिइयो । त्यसक्रममा मुखलिसलाई २८ कोर्रा हानियो भने मुखलिस सँग सल्किएकी ती महिलालाई २३ कोर्रा हानियो । साथै मुखलिसलाई काउन्सिलबाट पनि बर्खास्त गरिएको छ ।
४६ वर्षका मुखलिस धर्मगुरु समेत भएको बताइएको छ । सन् २००५ मा सरिया कानून लागू भएपछि सार्वजनिक रुपमा कोर्रा हान्ने सजायँ पाउने उनी नै पहिलो धर्मगुरु भएको बताइएको छ ।
स्मरण रहोस्, एकेह प्रान्तमा जुवा खेल्न, समलिंगी सम्बन्ध कायम राख्न, विवाह अघि यौन सम्पर्क राख्न, रक्सी पिउन सख्त प्रतिबन्ध छ । एजेन्सीको सहयोगमा
ठोरीमा त्रेतायुगका रामसँग सम्बन्धित तथ्य भएको स्थानीयको दाबी(भिडियाेसहित)